Toerana tsara hitsidihana any Delhi ao anatin'ny iray andro
Delhi ho renivohitr'i India sy seranam-piaramanidina Indira Gandhi International dia fijanonana lehibe ho an'ireo mpizahatany vahiny. Ity torolàlana ity dia manampy anao amin'ny andro farany andanianao any Delhi, avy amin'ny toerana hitsidihana, toerana fisakafoanana, ary toerana hijanonana.
Mila ianao Visa e-Tourista any India (e India or Visa Indiana Online) handray anjara amin'ny fahafinaretana amin'ny maha olom-pirenena vahiny any India. Raha tsy izany, afaka mitsidika an'i India ianao amin'ny a Visa any India e-Business ary te hanao fialam-boly kely sy fahitana any Delhi. ny Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Indian Visa Online (e-Visa any India) fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Inona no ho hita any Delhi?
Ny firafitra dia andohalambo sandstone natsangan'ny anglisy tamin'ny taonjato faha-20. Ity tsangambato malaza ity dia marika iray amin'ireo miaramila very tany India India 70,000 XNUMX tamin'ny ady lehibe voalohany. Nandritra izany fotoana izany dia nantsoina hoe Kingsway. Ny vavahady India dia noforonin'i Sir Edward Lutyens. Hatramin'ny 1971, taorian'ny ady tao Bangladesh, ilay tsangambato dia fantatra amin'ny anarana hoe Amar Jawan Jyoti dia fiorenan'ny miaramila very tany an'ady.
Ny fananganana an'io rafitra fakan-tahaka io amin'ny endrika lotus fotsy dia vita tamin'ny 1986. Ny tempoly dia toerana ara-pivavahana an'ny olona avy amin'ny finoana Bahai. Ny tempoly dia manome toerana ho an'ireo mpitsidika mifandray amin'ny tenany ara-panahy miaraka amin'ny fanampian'ny fisaintsainana sy vavaka. Ny habakabaka ivelan'ny tempoly dia misy zaridaina maitso sy dobo fitaratra misy taratra.
Fotoana - fahavaratra - 9 maraina - 7 hariva, ririnina - 9:30 maraina - 5:30 hariva, nakatona ny alatsinainy
Natokana ho an'i Swami Narayan ny tempoly ary naorin'ny BAPS tamin'ny taona 2005. Ny tempoly dia manana toerana manintona maro avy amin'ny Hall of Values ​​izay efitrano 15 misy refy telo, sinema IMAX amin'ny fiainan'i Swami Narayan, mitaingina sambo ny tantaran'ny India manontolo hatramin'ny taloha ka hatramin'ny ankehitriny, ary farany dia fampisehoana hazavana sy feo. Ny firafitra manodidina ny tempoly dia vita amin'ny vato fotsy mena ary ny tempoly dia vita amin'ny marbra. Ny firafitry ny tempoly dia aingam-panahy avy amin'ny tempolin'i Gandhinagar ary maro amin'ireo fahagagana ara-teknolojia no nentanin'ny fitsidihan'ny Swamy natao tany Disney.
Mianara momba ireo gara malaza any India
The trano mimanda manan-danja sy malaza indrindra any India dia natsangana nandritra ny fanjakan'ny mpanjaka Mughal Shah Jahan tamin'ny 1648. Ny manda goavambe dia amina vato mena amin'ny endrika maritrano an'ny Mughals. Ny fort dia misy zaridaina mahafinaritra, lavarangana, ary efitrano fialamboly.
Nandritra ny fanjakan'i Mughal dia voalaza fa voaravaka diamondra sy vato soa ny trano mimanda saingy rehefa nandeha ny fotoana rehefa very ny haren'ireo Mpanjaka dia tsy nahazaka ny fireharehana toy izany izy ireo. Isan-taona ny Ny praiminisitra India dia nanao kabary tamin'ny firenena tamin'ny fetin'ny fahaleovan-tena avy ao amin'ny Fort Red.
Fotoana - 9:30 maraina ka hatramin'ny 4:30 hariva, mihidy ny Alatsinainy
Ny fasana dia natolotry ny Ny vadin'i Mughal mpanjaka Humayun, Bega Begum. Ny firafitra iray manontolo dia vita amin'ny vato sandstone mena ary a Tranokala vakoka UNESCO. Ny trano dia misy fiantraikany lehibe amin'ny maritrano Persia izay nanombohana ny maritrano Mughal lehibe. Ny tsangambato dia mijoro tsy hoe toeram-pialan-tsasatra mpanjaka Humayun fotsiny fa mariky ny fitomboan'ny tanjaky ny fanjakan'ny fanjakana Mughal koa.
Ny tsangambato dia natsangana nandritra ny fitondran'i Qutub-ud-din-Aibak. A Rafitra mirefy 240 metatra izay manana lavarangana isaky ny haavo. Ny tilikambo dia vita amin'ny vato sandstone sy marbra mena. Ny tsangambato dia natsangana tamin'ny fomba Indo-Islam. Ny firafitra dia miorina amin'ny valan-javaboary voahodidin'ny tsangambato manan-danja maro hafa naorina tamin'ny fotoana iray ihany. Ilay tsangambato dia fantatra amin'ny anarana hoe Victory Tower satria namboarina ho fahatsiarovana ny fandresen'i Mohammad Ghori an'i Rajput mpanjaka Prithviraj Chauhan.
Fotoana - Misokatra mandritra ny andro manontolo - 7 maraina - 5 hariva
Ny zaridaina dia mivelatra amin'ny 90 hektara ary tsangambato malaza maro no hita ao anaty zaridaina. A toerana malaza ho an'ny mponina sy ny mpizahatany. Ireo tsangambaton'ny tarana-mpanjaka Lodhi dia hita ao amin'ny zaridaina manomboka amin'ny fasan'i Mohammad Shah sy Sikandar Lodhi ka hatrany Shisha Gumbad sy Bara Gumbad. Ny toerana dia tena tsara tarehy mandritra ny volana lohataona miaraka amina voninkazo mamony sy maintso maitso.
Mila tonga any India amin'ny dia ataon'ny orinasa? Vakio ny Tari-dalana ho an'ny mpitsidika anay.
Aiza no hiantsena
The lalan-kely sy lalan'i Chandni Chowk dia malaza tsy any Delhi ihany fa manerana an'i India noho i Bollywood. Ny sasany amin'ireo sarimihetsika ahafahanao mahita an'ity tsena taloha sy taloha ity dia i Kabhi Khushi Kabhi Ghum, The Sky is Pink, Delhi-6, ary Rajma Chawal. Ny tsena mivelatra dia mizara ho an'ny fivarotana mora izay isaky ny fizarana dia mahazo akanjo tsara indrindra, boky, asa-tanana, lamba, elektronika ary inona koa. Ny tsena dia a toeram-pivarotana malaza ho an'ny fampakaram-bady. Averina indray, soso-kevitra ny hisoroka an'i Chandni Chowk amin'ny asabotsy.
Fotoana - Misokatra ny tsena ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 8 hariva.
Iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Delhi hiantsena fatratra fiantsenana mahasoa teti-bola. Izy io dia iray amin'ireo tsena be olona indrindra ao Delhi ary anoroana hevitra ny tsy hitsidika ny faran'ny herinandro. Azonao atao ny mividy zavatra eto amin'ny kiraro, kitapo ary akanjo hatramin'ny boky sy asa-tanana. Matetika ny mpianatra dia feno olona eny amin'ny tsenan'i Sarojini satria afaka manitatra ny efitranony izy ireo raha tsy mavesatra am-paosy.
Fotoana - Misokatra ny tsena manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 hariva ary mihidy amin'ny Alatsinainy.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Dilli Haat dia amin'ny ririnina rehefa miloko sy mendrika an'i Pinterest. Ny tsena iray manontolo dia manana endrika ambanivohitra toa tanàna ary feno hetsika ara-kolotsaina. Raha mamakivaky ireo asa-tanana, firavaka, sary hosodoko, peta-kofehy isan-karazany ianao, dia azonao atao ny manamboatra sakafo avy amin'ny lafivalon'i India amin'ny fivarotana fanjakana eto izay toerana tena sakafo.
Fotoana - Misokatra ny tsena mandritra ny andro manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 10 hariva.
Iray amin'ireo tsena faran'izay tsara any Delhi miaraka amina fanamiana fitafiana endrika ambony ary koa mpivarotra amoron-dàlana. Ny tsena dia manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny akanjo, kiraro ary kitapo hatrany amin'ny kojakoja ao an-trano toy ny crockery sy ny fahatsiarovana toy ny asa-tanana sy sary sokitra.
Fotoana - Misokatra ny tsena manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 11 hariva nefa mihidy ny alahady.
Hafa noho ireo tsena ireo, ny toerana tsirairay ao an-toerana ao Delhi dia samy manana ny tsenan'izy ireo toy ny tsena afovoany Lajpat Nagar, ny toerana malaza any Connaught, ny Paharganj Bazaar, ny tsena Tibetana, ary ny tsenan'ny Flower
Aiza no hohanina
New Delhi dia manana safidy isaky ny maniry sy tsiro ny sakafo rehetra tadiavinao. Nanomboka tamin'ny nahandro hafakely sy vahiny hatramin'ny ankafizin-toerana sy ankafizin'ny arabe, azon'i Delhi daholo izany.
Amin'ny maha renivohitra azy, i Delhi dia manana ivon-toeran-kolontsaina maro tsy an'ny firenena vahiny ihany fa ny fanjakana rehetra any India ihany koa, ary ny sakafo amin'izy ireo dia mitombina avokoa. Ny tsena toa an'i Chandni Chowk, Khan Market, Connaught Place, Lajpat Nagar, Greater Kailash tsena, ary maro hafa any Delhi dia ivon-toeram-pisakafoanana ahafahanao miantsena sy mandray manaikitra na misotro amin'ny safidy tsy tambo isaina.
New Delhi izay renivohitry ny firenena dia manana safidy tsy tambo isaina amin'ny fijanonana amin'ny fanofana an'i PG sy trano fandraisam-bahiny na dia mandritra ny fotoana fohy aza mankany amin'ireo hotely manankarena sy lehibe.
Ny Lodhi dia hotely kintana 5 malaza sy be kintana ao Central Delhi, azo idirana amin'ny toerana fizahan-tany malaza rehetra.
Ny Oberoi dia fanipazana vato avy amin'ny ankamaroan'ny tsangambato ao Delhi ary tena akaikin'ny tsena Khan malaza ao Delhi ihany koa.
Ny Hotel Taj Mahal Safidy hotely lafo vidy hafa koa izay eo akaikin'ny vavahady India sy ny Rashtrapati Bhavan.